Ukugcinwa okubandayo kwe China / Freezer / Umkhenkce weKrisimesi yoMvelisi kunye noMthengisi | Udonga olukhulu
Umkhusane omdaka wePolar PVC uhlala uthambile nakwi-40 ° Celsius ngaphantsi kweqanda, uvumela ukudlula ngokulula kwabantu, izithuthi kunye neempahla kunye nokuthintela ngokufanelekileyo ukulahleka komoya obandayo. Iphepha lePolar PVC lukhetho olufanelekileyo lokugcina umbane kuba awuqulathanga drive yombane. Umkhusane womnyango wePolar awunalo icandelo lesenzo kwaye awuvelisi ingxolo ngexesha lenkonzo. Umtya opholileyo uyilelwe kumava wentengiso kwaye ubonakalisiwe kwiimvavanyo ezizimeleyo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zeendleko zamandla, ngelixa unceda ukuthengisa iikhabhathi ezipholileyo ukuhlangabezana nolawulo lobushushu olusemthethweni.
* Iminyango efrijiweyo
* Iikhabhathi zeChiller
Ukupakisha: Ngokwesiqhelo sipakisha iimpahla ngeebhegi zeplastikhi emva kokuqengqeleka kunye nge-50m, emva koko sapakisha kwiipelethi ukuhlangabezana nendawo yothutho. Singayila iibhokisi zebhokisi kunye neebhokisi ezingafakwanga umbane kwiimfuno ezizodwa ukuthintela ukonakaliswa zizithuthi. Kwimilinganiselo yangaphakathi yeeroli, umgangatho wethu yi-150mm; nathi sinokuyila iimfuno zakho.
Amakhethini e-PVC emacaleni omtya wamakhethini lukhetho lokugcina kubanda, iminyango efrijiweyo, iiDeli-zokubala, iikhabhathi zeChiller, amagumbi abandayo kunye neemeko ezininzi zefriji yokuthengisa. Ngokwesiqhelo ukuhlangana okungama-50%, umzila kaloliwe osisinyithi osisinyithi kunye ne-hook kwimicu- nokuba ngama-200 x 2mm okanye ama-300 x 3mm.
Sineendlela ezimbini zekhethini yePVC, iSmooth, kunye neRibbed kabini. Umkhusane womnyango osetyenzisiweyo uxhomekeke kwizicelo. Imicu ye-PVC enomtya ophakanyisiweyo kumacala omabini ziyafumaneka zinika ukuphuculwa kokuqina okubenza ukuba bakwazi ukumelana nefuthe eliphindaphindwayo elivela kutrafikhi enzima njengeelori ze-forklift.
Egqithileyo Iphepha leRubber leSilicone
Okulandelayo: Iphepha leRabha le-NR
Amnyama Amakhethini ePvc Strip
Cacisa iPvc Strip Curtains
Igumbi elibandayo lePvc Strip Curtains
Amashishini amnyama amakhethini ePvc
Pvc Strip Amakhethini Ac